एकीकृत जनक्रान्तिलाई दुनियाका कुनै पनि नवफासीवादले रोक्न सक्ने छैन : प्रकाण्ड
आज २५ औँ जनयुद्ध दिवस कसरी सम्झनुहुन्छ ?
२०६३ सालपछिको शान्तिकालीन मोर्चामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र १० वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरिराखेका प्रचण्डले बुर्जुवावर्ग, त्यसको सत्ता र संसदीय प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका अगाडि घुँडा टेकेपछि जनयुद्धरुपी नेपाली क्रान्ति, प्रतिक्रान्तिमा बद्लियो । जुन अहिले दलाल, पुँजीपतिवर्ग, दलाल सत्ता र दलाल संसदीय व्यवस्थामा पतन भएको छ । माओवादी क्रान्तिकारी नेता एवं कार्यकर्ता, जनमुक्ति सेना, जनयुद्ध लड्ने नेपाली जनता, जनयुद्धका महान् सहिदहरु, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरुलाई अराजनीतिक, अनैतिक र अमानवीय धोका भएको छ ।
यो बेलाको माओवादी पार्टी र जनयुद्धको मुख्य नेता प्रचण्डको वैचारिक विचलनतावादी, राजनीतिक अवसरवाद, सैन्य आत्मसमर्पणवाद, संगठनात्मक बिसर्जनवाद, आर्थिक अराजकतावाद र सांस्कृतिक विकृतिवादका विरुद्ध २०६५ वैशाखदेखि संघर्ष गर्दै आएको नेतृत्वको टिम र क्रान्तिकारीधार २०६९ असारमा प्रचण्ड पार्टीसँग विद्रोह गरी २०७१ मंसिर ८ गते कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठनसहित विगत पाँच वर्षदेखि एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गरिराखेको छ र त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गरिराखेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र एकीकृत जनक्रान्ति १० वर्षको जनयुद्धको रक्षक र बिकसित आयामको प्रतिनिधि बन्न गएको छ । जुन देश र जनताको आशा, विश्वास, भविष्य र विकल्प बनेको छ ।
फागुन १ गते नेपाली जनयुद्ध थालनीको २४ वर्ष पूरा भएर २५ वर्ष प्रवेश गरेको छ । जनयुद्ध थालनी भएको २०५२ फागुन १ गते, जनयुद्धको सशस्त्र १० वर्ष, संक्रमणकालका ६ वर्ष (२०६३–६८), प्रतिक्रान्तिका ३ वर्ष (२०६९–७१), प्रतिक्रान्ति र क्रान्तिको टक्करका ५ बर्ष (२०७२–७६) नियाल्दा हाम्रो नेपाली श्रमजीवि जनताको क्रान्ति डरलाग्दो उतार–चढाव, रक्तरञ्जित, महान् र सबै किसिमका प्रतिक्रान्तिकारीहरुका विरुद्ध एकीकृत जनक्रान्ति जारी रहेको गौरवपूर्ण गाथा छ । यो अवस्था र अवसरमा सर्वप्रथम १० वर्षे महान् जनयुद्ध र एकीकृत जनक्रान्तिका महान् सहिदहरुलाई ससम्मान, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
सहिद परिवारजनहरुप्रति उच्च सम्मानका साथ हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । बेपत्ता र घाइते योद्धाहरुको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । सिङ्गो पार्टीपंक्ति, माओवादी क्रान्तिकारीहरु, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका इमानदार नेता एवं कार्यकर्ताहरु र महान् नेपाली जनतामा क्रान्तिकारी अभिवादनसहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालमा जारी एकीकृत जनक्रान्तिको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीका हैसियतले नेपाली कम्युनिस्ट एवं सच्चा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका इमानदार नेता, कार्यकर्ता र आमनेपाली जनतामा के प्रतिबद्धता जारी गर्दछौँ भने सहिदको रगत, जनयुद्ध एवं आन्दोलनको लगानी अवमूल्यन हुन नदिने र क्रान्ति एवं परिवर्तनका बाँकी कार्यभार जुनसुकै मूल्यमा पूरा गर्नेछौँ ।
क्रान्तिकारी आन्दोलनको इतिहासमा कहिलेकहीँ मजाक पनि हुने गर्छ । यो नेपाली क्रान्तिको इतिहासमा एउटा मजाक हो । कुनै बेला बर्नेस्टींन, हिर्योख बेर्ग र श्राम पनि माक्र्सका सहपाठी थिए । पछि माक्र्सले ‘चुरीखतीर्की ’ वारे संश्लेषण गरी सार्वजनिक हमला गर्नुप-यो । बाकुननि पनि सहपाठी थिए, हेग महाधिवेशनमा अन्तर्राष्ट्रियबाट निस्कासन गर्नुभयो । प्लेखानोब र ट्रतस्की पनि लेनिनका सहपाठी थिए । पछि दुई जिब्रे फटाहा घोषणा गरेर लेनिनले संघर्ष गर्नुप-यो । लिलिसाङ, छनतुस्यु र वाङमिङ माओका नेता तथा सहयोद्धा थिए । उनीहरुका विरुद्ध माओले नेतृत्व लिएपछि सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र क्रान्तिले गुणात्मकता हासिल ग¥यो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको जीवन्त पाटो यस्तो छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा विगतमा जनयुद्ध लडेका मात्र होइन, त्यसको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र उनको समूह नै सत्ता र सरकारमा छ । अहिलेको प्रचण्ड, उनको समूह, सत्ता र व्यवस्था जनयुद्धको परिकल्पना र उद्देश्यको ठीक विपरीत छ । जनयुद्धको मान्यता र मालेमावादी विचार, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी नेतृत्व, सशस्त्र क्रान्ति, नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन, उत्पीडितवर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था र राष्ट्रिय मुक्ति हो । नेपालको अहिलेको सत्तासीनवर्ग त बुर्जुवा प्रतिक्रियावादबाट पनि पतित भएर दलाल पुँजीपतिवर्ग बन्न गएको छ । यो सत्ता असली दलाल पुँजीपतिवर्गको हो ।
व्यवस्था दलाल, संसदीय व्यवस्था हो । संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र त दलाल, पुँजीपतिवर्ग, त्यसको राज्यसत्ता र दलाल संसदीय व्यवस्थाको ‘रङरोगन’ मात्र हो, जसले जनतालाई ‘नयाँ परिस्थितिमा नयाँ भ्रम’ सिर्जना गरोस् । क्रान्तिले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थितिमा पुँजीपतिवर्गलाई मृत्युबाट बचाउन आइसियुको रुपमा प्रयोग गरिएको ‘ठर्रा रक्सीको निम्ति नयाँ बोतल’ मात्र हो । यसको नेतृत्वमा एमालेमा विलय भएर प्रचण्ड समूह पनि पुगेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजतन्त्रले बहुदलवादीहरुको लाज छोपिदिन राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था भनिदिए जस्तो मात्र हो किनभने सत्ताको बागडोर राजाकै हातमा थियो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी, १० वर्षसम्म सञ्चालित सशस्त्र जनयुद्ध, जनमुक्ति सेना, जनसत्ता, मालेमावादी विचार र नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गरी राष्ट्रको स्वाधीनतालाई सुनिश्चित गर्ने कार्यदिशाबाट विचलित भएका प्रचण्ड र उनको समूहको लाज छोप्ने’ रंग रोगन’ मात्र हो । सत्ता दलाल पुँजीपति बर्गको छ ।
ब्यवस्था संसदीय हो । प्रचण्ड र उनको समुह त्यसमा समाहित भएको मात्र हो । प्रचण्ड समूहको विभाजनता, आत्मसर्मपण र पतनका विरुद्ध भीषण संघर्षबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको नेतृत्व विकास भएको हो । हाम्रो पार्टीले १० वर्षको जनयुद्धको रक्षा र नेपालमा क्रान्तिको पूर्णताको उद्देश्यले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा विकास गरेर क्रान्ति सञ्चालन गरिराखेको छ । यसको राजनीतिक कार्यदिशा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो । अहिलेको दुनियाँलाई उत्तर साम्राज्यवाद व्यवस्थाको विकल्पमा ‘साम्यवादी विश्व व्यवस्था’ दिने राजनैतिक लक्ष्य हो ।
जब यो महान् कार्यको सुरुवात नेपाली राजनीतिमा हाम्रो पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् ग-यो । यसका विरुद्ध वर्तमान दलाल पुँजीपतिवर्ग, त्यसको सत्ता र सत्ताका सञ्चालकहरु आइलागेका छन् । हाम्रो पार्टी र यसका कार्यक्रममाथिको प्रतिबन्ध त्यसैको निकृष्ट उदाहरण हो । हाम्रो पार्टीमाथिको प्रतिबन्धले चारवटा विषयलाई निर्दिष्ट गरेको छ । पहिलो, शान्तिप्रक्रियाको आवरणमा देश र नेपाली जनतामाथि प्रतिक्रान्ति थोपरिएको कुरा, दोस्रो वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र सत्तासीनवर्ग दलाल, पुँजीपतिवर्ग भएको कुरो, तेस्रो प्रचण्ड समूहको दलाल पुँजीवादमा पतन भएको कुरा, चौथो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हो । यसले दलाल पुँजीपतिवर्ग र त्यसको वर्तमान राज्यसत्ताका विरुद्ध नेपाली श्रमजीवि जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गरिराखेको छ भन्ने कुरा । केपी ओली सरकार र ओली–प्रचण्डको नेकपाले हाम्रो पार्टी र क्रान्तिविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धले सरकार र सरकारी पार्टी प्रतिक्रान्तिकारी फासीवादी, हत्यारा, निरंकुश, भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती र दलालतत्व भएको कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा लाटोले पनि बुझ्ने गरी उदाङ्गिएको छ ।
विश्व राजनीतिमा श्रमजीवि जनताको आक्रोश र घृणाको भुमरीमा परेर एक्लिएको छ । हाम्रो पार्टी र जनक्रान्तिले प्रतिबन्धको सुविचारित प्रतिरोध गरिराखेको छ । आमनेपाली जनतामा स्थापित भएको छ । नेपाली जनताको आशा, विश्वास र विकल्प बन्दै गएको छ । पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका खराबीहरुबाट मुक्त हुँदै सुदृढ र विस्तार हुँदै गएको छ । यो बीचमा हाम्रो पार्टी, नेतृत्व र क्रान्तिको अतर्राष्ट्रिय छवि र उचाइ निकै बढेको छ । अतः प्रतिबन्धले दलाल पुँजीपतिवर्ग र त्यसको सत्तालाई विघटनको संघारमा पु-याएको छ भने हाम्रो पार्टी र जनक्रान्तिलाई विजयको दिशातिर अगाडि बढाइराखेको छ ।
अहिलेको विश्व विकसित र नयाँ ठाउँमा छ । शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्वव्यापी हैकम र दबदबा भएको विश्व नब्बेको दशकपछि र एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुको दशकको एकध्रुवीय विश्व छैन । एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकको अन्त्यतिरबाट अमेरिकी साम्राज्यवादी एक ध्रुवीय विश्व उछिन्दै दुई ध्रुवतिर प्रवेश गरेको विश्व दोस्रो दशकको अन्त्यतिर आउँदा मूलभूतरुपमा बहुध्रुवीय विश्वमा बदलिएको छ । यो अहिलेको विश्वको बहुध्रुवीय चरित्र हो । अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध रसिया केन्द्रित, चीन केन्द्रित, मध्यपूर्व केन्द्रित, युरोपियन युनियन केन्द्रित र दक्षिण एसिया केन्द्रित ध्रुवहरु खडा भएका छन् भने थुप्रै उपकेन्द्रहरु पनि सतहमा आएका छन् । विश्वको अहिलेको बहुध्रुवीय विशेषताले साम्राज्यवाद राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, प्रविधि र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि विभक्त भएको पुष्टि गर्दछ ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रतिध्रुवको अन्तरविरोध, सैन्य एवं व्यापार युद्ध र प्रतिद्वन्द्वितामा डरलाग्दो गरी फसेको छ । उसले चाहेर पनि त्यसबाट उक्सिन सक्दैन । अमेरिकी साम्राज्यवादले चाहे पनि विश्वमा उठेका घटनाहरुमा एक्लै फैसला गर्न सक्दैन । यसैलाई हाम्रो पार्टीले लेनिनले संश्लेषण गरेको साम्राज्यवादमा विकास भएर ‘उत्तर साम्राज्यवाद’ बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । उत्तर साम्राज्यवादी अहिलेको विश्वमा क्रान्तिको निम्ति विश्व परिवेश अनुकूल बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । यसर्थ, एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकको विश्वको विशेषता भनेको “उत्तर साम्राज्यवाद र श्रमजीवि जनताको क्रान्तिको विश्व हो ।” यो महान् लेनिनले भन्नुभएको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको विश्वको विकसित र नयाँ आयाम हो ।
कुनै पनि समाज क्रान्तिबिना न अस्तित्वमा रहन सक्दछन् त बाँच्न सक्छ । पुरानोको अन्त्य र नयाँको सिर्जना गतिशील समाजको अनिवार्य नियम हो । नेपाली समाजको पछिल्लो कालखण्डको विकासक्रमलाई मात्र हे¥यौँ भने प्रमाणित हुन्छ, १०४ वर्षे राणा शासनका विरुद्ध क्रान्ति नभएको भए राणा शासन र राणाकालीन समाज व्यवस्था अन्त्य हुँदैनथ्यो । २००७ सालको परिवर्तन पनि हुँदैनथ्यो । ३० वर्ष पञ्चायती निरंकुशताका विरुद्ध २०४६ सालका जनआन्दोलन नभएको भए नेपाली समाज सामन्तीबाट लोकतान्त्रिक यात्रामा पाइला चल्दैनथ्यो । १० वर्षको महान् जनयुद्ध नभएको भए सामन्ती प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका अन्त्य हुँदैनथ्यो । उता क्रान्ति समाजको गति र नयाँ जीवन हो ।
नेपालमा दलाल पुँजीपतिवर्ग, दलाल सत्ता, दलाल संसदीय व्यवस्था, दलाल केपी ओली नेतृत्वको सरकार, छोटो समयमा राष्ट्र र नेपाली जनताको जीवनमा देशद्रोही र अपराधी सावित भइसक्यो, जसले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा जीवन–मरणको संघर्ष गरी जनताले प्राप्त गरेका राजनैतिक अधिकार खोसेर जनताको राजनैतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दमन गरिरहेको छ । नेता, कार्यकर्ता र जनताको घोषित हत्या गर्दै हिँडेको छ । राजनैतिक आस्थाका कारण बेलगाम गिरफ्तारी र झुठा मुद्दा लगाई राखेको छ । भ्रष्टाचार, कमिशन र ठगीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ । राज्यको सम्पत्ति सरकार र सरकारी पार्टीको आडमा निजीकरण गरिँदैछ । राज्यको जग्गा कथित लिजको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीकरण गरिँदैछ । शिक्षा, स्वास्थ्य माफियाहरुको व्यापार र लुटका हतियार भएका छन् । राज्यलाई ओली, प्रचण्डको गुटकरण गरिँदैछ । सामाजिक सुरक्षा, महिला बेचबिखन, लागू औषध, व्यापार, वेश्यावृत्तिले देश आक्रान्त छ । महँगी वृद्धिले नेपाली जनता मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा छ । भर्खरै १५० रुपैयाँ किलोमा पाइने लसुनको मूल्य वृद्धि भई ६५० पुग्नुले मात्र यसको पुष्टि हुन्छ । देशलाई यो अवस्थाबाट बचाउने अरु कोही उपाय छैन । एक मात्र एकीकृत जनक्रान्ति हो । त्यो अनिवार्य सफल हुन्छ ।
भारतीय अतिक्रमण, एमसीसी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्ता विषयले राष्ट्र र जनताको शिर निहुराएको छ, यसमा पार्टीले के सोचेको छ ?
विश्व प्रभुत्वपूर्ण स्थापित गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्ने राजनीति, सैन्य राजनीति कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा लाटोले पनि बुझ्ने गरी उदाङ्गिएको छ । विश्व राजनीतिमा श्रमजीवि जनताको आक्रोश र घृणाको भुमरीमा परेर एक्लिएको छ । हाम्रो पार्टी र जनक्रान्तिले प्रतिबन्धको सुविचारित प्रतिरोध गरिराखेको छ । आमनेपाली जनतामा स्थापित भएको छ । नेपाली जनताको आशा, विश्वास र विकल्प बन्दै गएको छ । पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका खराबीहरुबाट मुक्त हुँदै सुदृढ र विस्तार हुँदै गएको छ । यो बीचमा हाम्रो पार्टी नेतृत्व र क्रान्तिको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र उचाइ निकै बढेको छ । अतः प्रतिबन्धले दलाल, पुँजीपतिवर्ग र त्यसको सत्तालाई विघटनको संघारमा पु-याएको छ भने हाम्रो पार्टी र जनक्रान्तिलाई विजयको दिशातिर अगाडि बढाइराखेको छ ।
नेपाली समाजका क्रान्तिकारी र प्रगतिशील क्षेत्रका विरुद्ध केपी ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर फासीवादी दमन गरिराखेको बेला क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकले देश र जनता, क्रान्ति र परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई निर्भयताका साथ खडा गरेर अविरल रुपमा समाचार प्रवाह गरिराखेको सुखद अवसरमा क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै आगामी दिनमा पत्रिकाको गुणात्मक प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।